१८:५३, ३१ अगस्ट २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन
११:५६, २२ अगस्ट २०१५ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (-गर्नू +गर्नु))
१८:५३, ३१ अगस्ट २०२०को रुपमा हालको पुनरावलोकनहरू (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
'''भीमबहादुर थापा''' निकै प्रशिद्ध नेपाली कलाकार, सैनिक कार्यक्रमका रेडिओ प्रस्तोता अनि दोस्रो बिश्वउद्ध लडेका वीर पनि हुन. तलका हरफहरू [http://www.kantipuronline.com/Nepal/arcarticle.php?&aid=5&isd=349 कान्तिपुर् अनलाईन] बाट जस्ताको तस्तै सारिएका हुन.
सन् १९४२ बाट१९४२बाट '४४ बीचको महासमरमा उनले जुन दृश्य देखे र आफूलाई पनि ती दृश्यहरूमा जसरी एकाकार गराए, त्यसको स्मृतिले आज पनि उनका शरीरका रौँहरू ठाडा हुन्छन्। उनी मान्छे मार्न नै खटिएका थिए। त्यसैले खालि 'मार कि मर'को 'आदेश' पालन गर्नु दिनचर्या भएको थियो। उनलाई कुखुरा मार्नुभन्दा पनि सजिलो मान्छे मार्नु रहेछ जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। युद्धभूमिमा 'प|mन्टलाईन'मा उभिएर शत्रुहरूतर्फ बन्दुक सोझ्याउँदा उनलाई महाभारतको कुरुक्षेत्र सम्झना हुन्थ्यो। तर, त्यहाँ उनलाई गीता सुनाउने कृष्ण थिएनन्। आफ्नै बुद्धि, विवेक र आँटले शत्रुहरूको छातीमा बन्दुकका गोली बर्साउनुपथ्र्‍यो। मार्नुपथ्र्‍यो।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/892199" बाट अनुप्रेषित